Sida si fudud laysugu waafajiyo iCloud iyo jadwalka taariikhda Google | Wararka IPhone
Luis Padilla | | iCloud, Casharrada iyo buugaagta
In kasta oo xaqiiqda ah in qaar badan oo inaga mid ahi ay ku shaqeeyaan dhammaan aaladaha ku jira nidaamka deegaanka ee Apple, haddana joogitaanka Google ee mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah adeegyada internetka ayaa ka dhigan in munaasabado badan ay tahay inaad midkood adeegsato. Mid ka mid ah su'aalaha inta badan la isweydiiyo ayaa ah sida loo waafajiyo iCloud iyo kalandarka Kalandarka Google toos ah, waana taas tan aan maanta kuu sharraxeyno.
Waa ikhtiyaar aad u habboon munaasabado badan, tusaale ahaan haddii aan haysanno taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone' ama kiniin, ama haddii aan shaqada nahayno "waa nalagu qasbay" in aan isticmaalno Kalandarka Google. Looma baahna inaad lumiso saacado ama lacag raadinta codsiyo noo oggolaanaya inaan qabanno hawshan, maxaa yeelay adeegyada wadaniga ah laftooda ayaa noo ogolaanaya inaan si toos ah oo bilaash ah u sameyno, waana taas tan aan si hoose kuugu faahfaahin doonno si faahfaahsan.
1 Laba faahfaahin oo muhiim ah in maskaxda lagu hayo
2 1. La wadaag iCloud
3 2. Ku soo deji Kalandarka Google
Laba faahfaahin oo muhiim ah in maskaxda lagu hayo
Si loo waafajiyo jadwalkaan waa inaan aqbalnaa laba dhibaato oo yar yar. Midka hore waa kaas waa inaan si guud ula wadaagnaa jadwalka iCloud waxaan dooneynaa inaan is waafajino, taas oo dhibaato weyn ku noqon karta kiisaska qaarkood (maahan tan). Taasi waxay ka dhigan tahay in qof kasta oo leh xiriiriyahaas la soo saaray uu heli karo jadwalka, laakiin xiriirintu ma sahlana in la helo.
Cilladda labaad ayaa ah in iswaafajintu tahay hal waddo oo keliya, laga bilaabo iCloud illaa Google, taas oo ah, kalandarka Google wax kama beddeli kartid wax kalandarkaas ah. Dhibaato ka badan, xaaladdeyda waa faa'iido, laakiin haddii aad u baahatid tan inaysan sidaas noqon, beddelka aan halkan ku bixinno kuma shaqeynayo adiga.
1. La wadaag iCloud
Tallaabada ugu horreysa waa inaad la wadaagto kalandarka koontadaada iCloud. Waayo, laga soo bilaabo biraawsarka kumbuyuutarka ee aan ka soo galno iCloud.com iyo kalandarka xulashadiisa ayaan gujineynaa astaanta afarta mowjadood (sida astaanta WiFi) si loo soo qaado xulashooyinka wadaagga. Waa inaan dhaqaajino xulashada Kalandarka Dadweynaha, oo aan nuqul ka dhigno iskuxirka ka muuqda hoostiisa.
2. Ku soo deji Kalandarka Google
Hadda waa inaan ka helno Kalandarka Google biraawsarka kumbuyuutarka, iyo shaashadda weyn gudaheeda ku dar kalandar URL, sida ku cad shaashadda.
Gudaha qaybta u dhiganta waxaan ku dhajineynaa cinwaanka URL-ka ee aan horey u soo guurinay, laakiin wax waa in la sameeyaa ka hor inta aan lagu darin Google. Waa inaan u beddelnaa qaybta hore ee kalandarka "webcal" oo loo beddelaa "http" sida ka muuqata shaashadda. Marka tan la sameeyo, waxaan riixi karnaa "Add Calendar" si ay ugu muuqato Kalandarka Google.
Hawlgalkan waxaan ku celin karnaa marar badan sida aan ugu baahanahay jadwal badan oo iCloud ah. Kala xulashada jadwal walba ee Jadwalka Google waxaan ku badali karnaa magaca, midabka, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo is waafajiyo iCloud iyo kalandarka Google si fudud
Waad salaaman tahay, waxaan raacay talaabooyinka oo qaabka PC-ga ee jadwalka isbeddelada aan ku sameeyo mobilka lama cusbooneysiiyo. Hadday run tahay inay markii hore ii keento dhacdooyinka mobilka, laakiin mar kale jadwalka la sameeyo, casriyeynta iphone => pc ma socdo, laakiin haddii si kale loo eego, taasi waa, PC-ga mobilka (runtii, waa waa deg deg)
Maxaa fashilmi kara ???
Mahadsanid Luis, waad ku mahadsan tahay boostada. Mar alla markaan isku xiro kalandarka iCloud ee la wadaago kumbuyuutarkayga, ma sii hayn karo inaan arko cusboonaysiinta kalandarkaas. Waxay u egtahay in dhacdooyinka la isla jaangooyay ilaa daqiiqadaas ka dibna aysan jirin wax iswaafajin dheeri ah. Soo jeedin kasta?
Hagaag, ma aqaano ... hubi talaabooyinka maxaa yeelay way i cusbooneysiisaa
Waxaan ahay sida Andres, oo waxaan u sameeyey sidii kun jeer oo kale. Wixii aan ku dhejiyay iPhone-ka, kama sii muuqanayso kalandarka google
Waxay u dhacdaa si isku mid ah.
Aad baad u mahadsantahay !!! inbadan kadib markii aan kula baaray taladaada ayaan daqiiqad gudaheed ku sameeyay .... salaan
Ku jawaab isabel
Waxaan tan sameeyay dhowr jeer oo dhacdooyinka aan ku abuuro kalandarka iCloud kama muuqan jadwalka Google. Wax ma laga yaabaa inay is beddeleen?
Ku jawaab Eldin
Waxay igu dhacdaa si isku mid ah. Waxaan sameeyaa talaabooyinkan (waxaan isku dayay mobilo kala duwan) dhacdooyinka ilaa daqiiqadaas la abuurayna way muuqdaan laakiin kuwa cusubi mar dambe ma soo muuqanayaan, mana i digayaan, weligoodna igama shaqeysiiyaan. Waxaad moodaa in macluumaadka hada jira laakiin kan cusub uusan cusbooneysiin. Qofna ma garanayaa qaab kale? Waxaan diidayaa inaan iibsado iPhone kaliya jadwalkaan bilaa macnaha ah, waaw. Laakiin waxaan ugu baahanahay arrimaha shaqada !!
Ku jawaab Rocío
Íñigo Iturmendi dijo
Waa maxay waxtarka! Mahadsanid, Luis.
Jawaab Íñigo Iturmendi
Weyn Ma aanan helin macluumaadka xiriiriye kale.
Jawaab Ricardo Galache
Qoraal aad u wanaagsan. Aad baad ugu mahadsantahay wax ku biirintaada.
Mahadsanid! Faa'iido leh, cad oo kooban.
Jawaab Daniel Duarte
Waad salaaman tahay, waan iswaafajiyay jadwalka, laakiin markaan ku daro xusuusin cusub kalandarka iCloud, laguma cusbooneysiiyo kalandarka gmal.
Waxaan u sameeyay is waafajinta si Google Calendar dhacdooyinka kalandarka Apple loo arko. Miyay si toos ah u wada shaqeyn doonaan mustaqbalka mise waa inaan sameeyaa mar kasta oo dhacdo cusub la abuuro kalandarka google?
Xiriirrada Kale (TOC), beddelka ajandahaaga oo leh asturnaan guud